Qorista Kaadhadhka Iibka Dijitaalka ah - TELES RELAY
Shaqo bixintaCameroon - Job Offers
By bryanekobe On Juun 16, 2020
Habka Integral Ujeeddadiisu waa inay noqotaa bartilmaameedka ganacsatada da'da yar ee qaaradda Afrika. Waxay ku doodeysaa horumarka qaaraddeenna qaaliga ah iyada oo loo marayo firfircoonaanta, iyo hamiga dhalinyarada. Waxay aaminsan tahay inay u fiicnaanayaan dhammaan dhallinyarda Afrikaanka ah ee rajo ka qaba qaaraddan, oo ah kobcinta bini aadamnimada. Naftaada u noqo qayb muhiim ah oo riyadan rumowday iyada oo ah, masrax noo dhan ...
Waxaan shaqaaleysiinaa Adeegyada Ganacsiga baahiyaheena aragtida tooska ah ee internetka iyo nashaadaadka abuurka aqrinta.
Waxaad qaadan doontaa tababbarka kahor, iyo xaqiijinta kadib, si dhakhso ah ayaad uga qaybqaadan doontaa.
Mushaarkaaga wuxuu u dhexeeyaa 50 CFA francs illaa inka badan 000 CFA franc, haddii aad shaqeyso oo aad si adag u raacdo tilmaamaheena.
raadsanaya Maareeye haad rooti keliya…
Shaqaalaynta ee karinta weheliso iyo karinta karinta ah…
shaqaalaysiinta Wakiilada Ururinta Microfinance
Saaxiibbo kula sii joogtid socdaalkaaga, fikir wanaagsan ama xun?